Ukuzibophezela kwethu ku-NCS Sheffield - Element Society
Ukuzibophezela kwethu kwi-NCS Sheffield
UKUKHETHA KWETHU LWE-NCS SHEFFIELD
Inhloso yethu ukuqhuba uhlelo oluxubene lomphakathi oluphephile futhi lufinyeleleka kubo bonke abasha.
Sizama konke okusemandleni ethu ukuhlala nabantu abasha abanezidingo ezihlukahlukene futhi lokhu kwenziwa ngecala ngamacala. Lapho abantu abasha noma abazali beye babonisa izidingo zezokwelapha / ukwesekwa ngesicelo sabo, sizoxhumana nabo ukuze sithole ulwazi oluthe xaxa futhi sisebenze nazo zonke izinhlangothi ezibandakanyekayo ukuze sithole isisombululo esingcono kakhulu.
Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuphepha kwabahlanganyeli, abasebenzi, izisebenzi zokuzithandela kanye nabalingani phakathi nohlelo. Sisebenza nabalingani bethu abanolwazi, sisebenzise abasebenzi abaqeqeshwe ngokugcwele futhi sithobela yonke imithetho efanele. Sidinga ukuthi abahlanganyeli balandele ikhodi yokuziphatha elula.
Abalingani abaphezulu kakhulu
Uhlelo lwethu lwe-NCS lunikezwa ngenkxaso yeqembu lezinhlangano ezihlangene nakho okubalulekile kokusebenza nabantu abasha. Sisebenza ngokusekelwa kwemikhandlu yasendaweni kanye nezikole.
Phakathi nayo yonke imisebenzi, abantu abasha bahambisana nabafundisi noma abacebisi abavotayo, futhi abasebenzi abancane abayingxenye yabafana bayoba yi-1: 7. Yonke imisebenzi yangaphandle esikhungweni somsebenzi iholwa abafundisi abaqeqeshiwe ngokugcwele. Ithimba ngalinye liholwa ngumeluleki oqhubekayo weningi lenhlelo. Bonke abasebenzi bakhethwe ngokucophelela, bahlolwe futhi baqeqeshwe kuyo yonke imisebenzi abayithumelayo. Wonke umuntu oqashwe yi-Element kudingeka ukuba ahlolwe i-DBS (eyaziwa ngokuthi i-CRB).
Ukuthobela yonke imithetho efanele
Sithobela ngokugcwele yonke imithetho efanele futhi, lapho kufanele khona, abalingani bethu basebenzi bangaphandle balayisensi ngaphansi kweMigomo Yelayisense Yezenzo Zokuzijabulisa 2004. Thina (noma abalingani bethu) senza ukuhlola okuningiliziwe kwengozi kuyo yonke imisebenzi. Bonke abasebenzi baqeqeshwe ukukhomba, ukuqaphela nokunciphisa izingozi ezivela ngesikhathi sohlelo.
I-NCS inselele ngokuyinselele futhi uziphoqa. Silindele ukuzibophezela, ukuzinikezela kanye nomdlandla. Abahlanganyeli banesibopho sokulandela ikhodi yethu yokuziphatha elula phakathi nohlelo. Uma umhlanganyeli engathí sina noma ngokuqhubekayo ephule lekhodi yokuziphatha, kuzomele sibacele ukuthi bashiye uhlelo. Kulesi simo, lo mfana kufanele abuyele ekhaya.
Ikhodi Yokuziphatha Yomhlanganyeli
I-1. Landela imithetho yokuphepha nomthetho
I-2. Shiya kuphela isayithi ngeMentor
I-3. Ukungena kwamakamelo abanye abantu noma amaflethi
I-4. Yiba ekamelweni lakho emva kwe-10.45pm
I-5. Akukho utshwala, izidakamizwa ezingekho emthethweni noma amapenki
I-6. Hlonipha futhi uhlanganise nabanye abantu